I-Semalt Expert: Isikhokelo sokuCoca i-Subdomains Kwi-Google Analytics
Le mihla, kubaluleke kakhulu ukusetha izihlungi zenkcubeko kunye ne-sub-domains ku-Google Analytics. Oku kuya kukuvumela ukuba uhlalutye, uhlalutye kwaye ujonge indlela ye-website yakho kunye nemithombo yazo. Ingaba unayo iblogi, iwebhusayithi yewebhusayithi, iphepha elinamanani amanqaku okanye indawo echaphazelekayo, kubalulekile ukuhlunga izizinda eziphantsi.
Lapha u-Andrew Dyhan, enye yeengcali ezikhokelayo uSemalt , uthethe ngezinye iingcebiso ezilula kulo mbandela.
Misela i-Google Analytics
Isinyathelo sokuqala ukusetha i-Google Analytics kwii-subdomains zakho. Kufuneka usebenzise iikhowudi ezifanayo okanye ezahlukeneyo ze-UA kwaye uzigcine zigcina kwindawo ethile kwikhompyutheni yakho. Kungase kubonakale kulula, kodwa kufuneka ukhumbule ukuba akuzona zonke iiwebhusayithi ezisetyenziswayo ezifanayo ze-UA. Uya kufuneka udale izihlunu ezahlukeneyo kwiimimandla esezantsi kwaye uqinisekise ukuba iikhowudi zifakwe ngokufanelekileyo.
Yenza imbono entsha kwi-Google Analytics
Ngokulandelayo, kufuneka wenze imibono emitsha kwi-Google Analytics. Emva kokuba uvula i-akhawunti yakho ye-Google Analytics kwaye uye kwideshibhodi yakho, kufuneka uhlengahlengise izicwangciso ezivela kwikhoneni eliphezulu ekunene apho kukho imenyu yomlawuli. Apha ungenisa iipoleni ezininzi ngangokunokwenzeka. Into efunekayo ukuba uyikhumbule kukuba ukhetha izihlunu ezahlukeneyo kwiwebhsayithi ezahlukileyo kwaye wenze iimbono ezintsha rhoqo xa isayithi efakwe apha..
Yenza iMiboniselo yoVavanyo
Ukuba ungumtsha kwiGoogle Analytics, sinokukucebisa ukuba udale iimboniselo zokuvavanya ukuphepha nayiphi na ingxaki. Kwi-domain nganye kunye ne-sub-domain, ungenza imibono eyahlukileyo yovavanyo oluya kuqinisekisa ukuba ugweme zonke iimpazamo. Emva koko unako ukufikelela kwidatha yakho yezithuthi zorhwebo ukuze ukwazi ngakumbi indlela le nkqubo isebenza ngayo.
Sebenzisa izihlungi zesintu
Emva kokuba udale imibono emitsha, isinyathelo esilandelayo kukusebenzisa izihlungi eziqhelekileyo. Kule nto, kufuneka ukhethe icandelo lokucoca isiqhelo kwaye uye kwiqhosha lerediyo. Cofa kwiqhosha kwaye ungeze ii-subdomains zakho apha ukuze uqalise. Ukongeza isihlungi sokwenkcubeko yenye yezona ndlela ezinzulu kwaye ziyamangalisa ukuba wenze umsebenzi wakho ngokuchanekileyo.
Yongeza uludwe lokungabikho lokuthunyelwa
Ukongeza uluhlu lokungabandakanywa kokuthunyelwa luyinto efanelekileyo njengoko kuya kuthintela i-subdomains yakho ukuba ifumene i-traffic fake ne-quality quality. Kule nto, kufuneka ukhethe ipropati yakho okanye i-subdomain. Emva kokuba sele ukhethiwe, unokuklikha iqhosha lolwazi lokulandelela kwaye ufumane uluhlu olugqityiweyo lokuthunyelwa ngaphandle. Apha ungongeza i-URL yakho ye-subdomain kwaye uqalise.
Yiyiphi i-subdomain kunye nendlela yokuyilandela?
Ukuba unamakhasi ambalwa ewebhu apho ii-URL ziyi-www.abc.com okanye enye into, kulula ukuba ube nama-subdomain oyikhethayo kunye nenani labo alikhawulelwanga. I-subdomain idibansi enye enye eyenziwe phantsi kwewebhusayithi yakho eyintloko kwaye inokusetyenziswa okanye ikhutshwe naliphi na ixesha. Ngokuqhelekileyo, ukuba abasebenzisi bahamba ukusuka kwinkonzo enye yokubamba komnye, kulula ukuba bahlale kwiimimandla ezifanayo kwaye oku akuyi kuphazamisa idumela labo jikelele kwi-intanethi. Kwakhona, ukukhankanya i-subdomain yakho kulula njengoko igama le-domain eliphambili liza kulihlawulela egameni lakho kwaye intlawulo izithunyelwa ngokuzenzekelayo ukusuka kwikhadi lakho lesikweletu okanye kwi-PayPal yakho Source .